NKPUGHE 21 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (NKP 21)
E mezuola ihe nile. Mụ onwe m bụ Mmalite na Ọgwụgwụ ihe nile. Aga m enye ndị akpịrị na-akpọ nkụ isi iyi nke mmiri ndụ, dị ka ihe onyinye.
Onye ọ bụla meriri ga-eketa ngọzi ndị a nile. Aga m abụkwa Chineke ya, ya onwe ya ga-abụ nwa m.
O jupụtara nꞌebube Chineke, na-enwụ ma na-achakwa dị ka nkume dịkarịsịrị oke ọnụ ahịa, dị ka nkume jaspa, dị ka nkume kristal.
Ọnụ ụzọ atọ dị nꞌotu akụkụ mgbidi ahụ, atọ dị nꞌugwu, atọ na ndịda, atọ nꞌọwụwa anyanwụ, atọ nꞌọdịda anyanwụ.
Mgbidi ahụ nwere nkume iri na abụọ e ji tọọ ntọ ala ya. Nꞌelu nkume ndị a nꞌotu nꞌotu ka e dere aha ndị ozi iri abụọ nke Nwa atụrụ ahụ.
Mgbe ọ tụchara ya, ọ chọpụtara na ogologo ya na obodobo ya bụ otu. Nꞌezie, o nweghị otu akụkụ nꞌime akụkụ anọ nke mgbidi a nwere ka ibe ya. Ogologo otu akụkụ nꞌime akụkụ anọ ndị a dị puku kilomita abụọ na narị kilomita anọ.
Ihe e ji rụọ mgbidi obodo ahụ bụ nkume dị oke ọnụ ahịa a na-akpọ jaspa. Ọ bụkwa ezi ọlaedo a nụchara anụcha, nke na-enwụ dị ka enyo, ka e ji rụọ obodo ahụ.
E ji nkume dị oke ọnụ ahịa ndị a chọọ ntọ ala mgbidi obodo ahụ mma: Ntọ ala nke mbụ, nkume a na-akpọ jaspa, ntọ ala nke abụọ nkume a na-akpọ safaia, ntọ ala nke atọ nkume a na-akpọ kaldoni, nke anọ nkume a na-akpọ emeralụdụ, nke ise nkume a na-akpọ sadonks,
E jikwa nkume dị oke ọnụ ahịa a na-akpọ paọl rụọ ọnụ ụzọ ama iri na abụọ ahụ. Ọnụ ụzọ ama ọ bụla ka e ji otu nkume a rụọ nꞌotu nꞌotu. Ihe e ji rụọ okporo ụzọ dị nꞌobodo ahụ bụ nanị ọlaedo a nụchara anụcha, nke na-enwụ dị ka enyo e hichaziri nke ọma.
O nweghị ụlọ nsọ bụla m hụrụ nꞌime obodo ahụ nꞌihi na Onyenwe anyị Chineke pụrụ ime ihe nile na Nwa atụrụ ahụ bụ ụlọ nsọ obodo ahụ nwere.
Ọ dịkwaghị mkpa ọ dịrị obodo ahụ ka anwụ ma ọ bụ ọnwa nye ya ìhè nꞌihi na ebube Chineke na-enye ya ìhè. Nwa atụrụ ahụ bụkwa oriọna ya.
Ọ bụkwa ìhè ya ga-enye mba nile dị nꞌelu ụwa ìhè. Ndị eze ụwa nile ga-abịakwa webata ebube ha nꞌime ya.
A naghị emechi ọnụ ụzọ obodo ahụ emechi. Ha na-eghe oghe ụbọchị nile. Abalị ọ bụla adịkwaghị nꞌebe ahụ.
Ebube na nsọpụrụ nke mba nile ka a ga-ewebata nꞌime ya.
Ọ dịkwaghị ihe ọ bụla rụrụ arụ ga-abata nꞌime ya. Otu a kwa ọ dịkwaghị onye na-eme ihe arụ, ma ọ bụ onye ụgha ga-abata nꞌime ya. Kama ndị ga-abata nꞌime ya bụ nanị ndị ahụ e dere aha ha nꞌakwụkwọ nke ndụ Nwa atụrụ ahụ.